Mashandisiro Ekushandisa Ruzhinji Zvifambiso paApple Mepu | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa Ruzhinji Zvifambiso paApple Mepu
Apple inoramba ichivandudza iyo Mepu app, uye ikozvino angangoita maguta ese kuSpain ane ruzivo rwekufambisa rwevanhu ruripo, kuti akwanise kuverenga nzira dzako uchishandisa. Inoshandiswa sei? Ndezvipi zvaunogona kuita? Isu tinokupa iwe kiyi dzese kuti uwane zvakazara kubva pane iri basa izvo izvozvi zvatinogona kushandisa anenge munhu wese.
Kazhinji paunenge uchigadzira nzira yekuenda kwawakatsvaga, sarudzo yekusarudzika iyo Mepu inokupa ndeye mota. Nekudaro, zviri nyore kwazvo kushandura nzira dzekutakura, uye kusarudza nzira yekufamba yakanakisa, shandisa zvifambiso zveveruzhinji kana kutogawaniswa kwekufambisa Iyi yekupedzisira sarudzo haisati yavapo kuSpain, asi Ehe, isu tatova neruzhinji rwekutakura sarudzo mumaguta mazhinji. Iwe unongofanirwa kutarisa pasi pechiso uye sarudza iyo tebhu «T. Veruzhinji »kushandisa otomatiki ruzivo rwekufambisa rwevanhu muguta rako uye kukupa dzimwe nzira dzakasiyana.
Inowanzo kukupa nzira dzinoverengeka nenzira dzakasiyana dzekufambisa uye zviyero zvakasiyana zvenguva yekushanya, kuti ugone kusarudza iyo inonyatsokodzera iwe. Izvo zvakare inokuzivisa iwe nezvekusvika nguva yebhazi, metro kana chitima. Asi kana izvi zvisina kukwana unogona ona zvimwe zvingasarudzwa nekudzvanya pa "Dzimwe nzira", chinja nguva yekubva kana kuseta nguva yekusvika kuti uzive kuti inguvai yaunofanira kutora bhazi uye usanonoka. Kuchinja mavambo enzira kunogona kuitwawo, kana iwe usiri kuda kumisikidza nzvimbo yako yazvino sepokutangira. Sarudzo zhinji dzatinotsanangudza muvhidhiyo pakutanga kwechinyorwa. Kana nzira yacho yangosimbiswa, iwe unongofanirwa kuteedzera rairo pane yako iPhone uye / kana Apple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Mashandisiro ekushandisa Ruzhinji Zvifambiso paApple Mepu
Mashandisiro aungaita Apple Watch kutora pikicha ine iPhone
Iyo itsva iPad Pro ine 3D kamera inogona kuwanikwa munaKurume